Iyo CryptoPad yekubatana suite. Imwe nzira yeGoogle Workspaces | Linux Addicts
Iyo CryptoPad yekubatana suite. Imwe nzira yeGoogle Workspaces
Diego ChiGerman Gonzalez | 08/11/2021 12:15 | General, Zvirongwa, Free Software
Imwe nguva yapfuura muverengi akatsamwa nekuti takashandisa mafomu eGoogle kuita ongororo. Akashamisika kana isu tingadai tisina kushandisa imwe nzira yakavhurika sosi. Zvakaoma kuwana chimwe chinhu chisina yakavhurika sosi imwe nzira (Kunze kwenyaya yemitambo kana vatyairi vevhidhiyo kadhi). Kuti zviri nyore kugadzirisa uye zvine zvinyorwa zvakakwana, chimwe chinhu.
Ehe, tingadai takakumbira maadmins kuti aise iyo WordPress ongororo plugin (Vade retro, Satani! *) Kwatiri. Gadzirawo yako fomu muPHP pane yekunze sevha yewebhu kana, kana iwe uchikwanisa kuwana ine simba rakawanda, isa nyanzvi yemukati maneja.
O, tingadai takashandisa, dai taiziva kuti iripo, CryptoPad.
1.1 Nzira dzekushandisa CryptoPad
2 Ndiani anobhadhara zvirongwa zvemahara?
Iyo webhusaiti yeprojekiti inoitsanangura se:
Iyo yakavhurika sosi, yakavharidzirwa, yekupedzisira-kusvika-kumagumo kubatana suite
Muzita randinotsanangura seimwe nzira yeGoogle Workspaces nekuti haina chaiwo maapplications. Muchokwadi, haiuye neakazara izwi processor asi ine akapfuma mameseji edhita. Zvisinei, panyaya yekuvanzika ine mukana wakakura. CryptPad yakagadzirirwa kugonesa kubatana uye kuchengetedza data pachivande. Ndiyo bhurawuza inotungamira encrypting uye decrypting zvese zvirimo. Nekudaro, zvinyorwa, chats uye mafaera haaverengeke kunze kwechikamu chatakabatana. Kwete kunyange vatariri vebasa vanogona kuwana ruzivo rwako.
Nzira dzekushandisa CryptoPad
CryptoPad inogona kushandiswa mune chero yenharaunda zviitiko zvemahara, pane purojekiti server kuburikidza neyakabhadharwa chirongwa kana yekuzvimiririra pane yedu server. Mune yemahara modhi, isu tinogona kusarudza kushandisa zvikumbiro semuenzi kana semushandisi akanyoreswa.
Vaenzi vanokwanisa kuwana maapplication anotevera:
Mupfumi chinyorwa chinyorwa.
Code editor (Inoenderana nemitauro yakasiyana yepurogiramu).
Zvinokwanisika kuenda kubva kune muenzi kuenda kune akanyoreswa mushandisi kuitira kuchengetedza basa redu.
Sevaenzi tinogona zvakare:
Ona uye dhawunirodha magwaro akagovaniswa nevamwe vashandisi.
Rongedza, pinza uye kutumira kunze magwaro.
Svika iyo nhoroondo uye rondedzero yevashandisi.
Kukurukurirana kuburikidza chat.
Kugona kuchengetedza magwaro akashanyirwa mubrowser.
Zvinyorwa zvinochengetwa kwemazuva makumi mapfumbamwe.
Mune yemahara yakanyoreswa mushandisi modhi, anotevera maficha anowedzerwa:
Mabasa anowedzerwa kune ese maapplication.
Kugona kugadzira profil uye kuwedzera vanobatika vane yakadzama yekuwana madhiraivha.
Kuwanikwa kwenzvimbo yekuchengetedza mafaera anosanganisira mifananidzo uye PDF.
Kugona kwekugovera mafaera (Kusvika ku25 MB) nevamwe vashandisi kana kuaisa mune mamwe magwaro.
Nzvimbo yekuchengetedza inopa matemplate uye kugona kugadzira uye kugovera maforodha.
Kusvikira ku1GB yekuchengetedza.
Kune chikamu chayo, chirongwa chekubhadhara chinouya nezvinhu zvinotevera:
Zadzisa maficha mune ese maapplication.
Zvichienderana nehurongwa, nzvimbo yekuchengetedza inowedzerwa kubva pa5 kusvika ku50 GB. Iyo yekurodha quota yefaira rega rega inova 150 MB.
Kukosha kwehunyanzvi rutsigiro kuburikidza netiketi system kana email.
Ndiani anobhadhara zvirongwa zvemahara?
Iyo purojekiti, yakazvarwa muna 2016, inotsigirwa neakasiyana French neEuropean masangano akadai BPI France, NLNet Foundation, NGI Trust, Mozilla Open Source Tsigiro, pamwe nemipiro uye kunyoreswa kune cryptpad.fr. Izvi zvinobvumira iyo kodhi kodhi kutorwa uye kuiswa nevashandisi pamaseva avo.
Nezve nyaya yekuvanzika, chirongwa chinojekesa kuti:
CryptPad haina pundutso kubva mushandisi data. Ichi chikamu chechiratidzo chemasevhisi epamhepo anoremekedza zvakavanzika. Kusiyana nemapuratifomu makuru anoti "akasununguka" uchigadzira purofiti kubva kune ruzivo rwemunhu, CryptPad ine chinangwa chekuvaka yakagadzikana modhi inopihwa mari nekuzvidira nevashandisi.
Isu tinopa CryptPad mashandiro emahara nekuti isu tinotenda kuti munhu wese anokodzera kuvanzika, kwete vanhu vane mari inoraswa chete.
Pasina kupokana, iyo yemahara nharaunda chiitiko inzira yakanaka kune Google Workspaces. Asi, senge yekuzvigashira sarudzo, ndinofunga NextCloud ndiyo yakakwana.
* WordPress plugins ndiyo yakavhurika sosi Norton Antivirus. Paunoda kurangarira vakatora nzvimbo yese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo CryptoPad yekubatana suite. Imwe nzira yeGoogle Workspaces
Ndinobvumirana. Nextcloud iri nani uye ine "mafomu" ayo. Kugadzira mafomu. Tinovashandisa zvishoma. Dambudziko nderekuti ungave sei nechokwadi chekuti yakasarudzika mushandisi uye kwete imwe chete nekuita mavhoti akati wandei
Yakanga isiri mushandisi chete. Paive nevazhinji vedu vaisanzwisisa kushandiswa kweGoogle platform yeongororo iyoyo.
Raspberry Pi OS yakavakirwa paDebian 11 yave kuwanikwa, ine Linux 5.10, GTK 3 uye zvimwe zvinhu zvitsva.
Telegrand neTok, GNOME uye KDE vanoshanda pane yavo yeTeregiramu vatengi